Eyona ndawo iphakanyisiweyo yeZirconiaSlidePlate, uMvelisi weRingi kunye neFektri | Funmeet
Ukwanelisa imfuno yobomi obude yesilayidi sesango lesilayidi kwisityalo sentsimbi, okwangoku yehlisa iindleko zokusetyenziswa okwenziwe ngentsimbi nganye, ngokwenza uphando rhoqo, ukuvavanya nokuphucula, siguqula umlomo wombhobho weZro2, iringi kunye nokufakwa kwenxalenye yesango lesilayidi esinezixhobo kunye nendibano enye . Emva kokuphuculwa, babonisa ukusebenza okungcono ekusebenzeni kanye, bafumana igama eliphezulu kubaxumi.
I-PMO1 kunye ne-PMD inyuselwe iZro2 Slide Gate Plate, Ring, Inset.
Iimveliso zethu ze-HP kunye ne-HD PMO1 kunye ne-PMD zinobunyulu obuphezulu kunye nokuxinana, ukutyumka okugqwesileyo, ukumelana nokhukuliseko lomhlaba kunye nozinzo lokothuka, ukunyusa amaxesha okusebenza kwamacwecwe esango kunye neemveliso ezongezwayo.
Ukuze kuphuculwe umgangatho weemveliso ze-ZrO2 sliding plate equkethe i-MgO kunye nokuphucula ubomi bayo benkonzo kwisiguquli, iifoto zesakhelo esincinci ngokukhulisa amaxesha ayi-10000 ~ 100000 athathiwe. Inkqubo yolwakhiwo oluncinci kunye nokubola kwemveliso ngaphambi nasemva kokusetyenziswa ziphandwe ziifesem-eds. Iziphumo zibonisa ukuba izigaba eziphambili zekristale ziyimicu ephothiweyo c-ZrO2 kunye ne-granular m-ZrO2 crystal, Inani elincinci le-M2S kunye nezinye izigaba zesamente zenziwe phakathi kweekristali. Isilayidi esisetyenzisiweyo esisetyenzisiweyo sinesakhiwo secandelo. Utshintsho kwisigaba se-eutectoid se-ZrO2 senzeka kwindawo yokuphendula kwaye kuthotho lweemveliso zokuphendula, ezifana neCaZrO3, FeO, spinel, silicate, njl.
Iindidi zensimbi ezahlukeneyo, ukusebenza kwe temp ezahlukeneyo. Yentsimbi engamanzi, ukungcola okungafaniyo kwemali kunye nezantya kuya kuba nefuthe kubomi bokusebenza kwesilayidi sesango lesilayidi.
Ukujonga iziphene ze-aluminium yesiqhelo yokuhambisa ipleyiti, njengamandla asezantsi, ukunganyangeki kokubola kunye nokuxhathisa okungafunekiyo kwe-thermal, uphando olwenziwa kuvavanyo lwenziwa kwimiba yezinto eziphathekayo, izongezo zepowder ezincinci kunye netekhnoloji yemveliso. Ngokusekwe kwi-aluminium yesiqhelo esityibilikayo, ipleyiti yesilayidi edityanisiweyo kunye nokusebenza ngokugqwesileyo kuphuculwe, okuhlangabezana neemfuno zenkonzo yokuphosa i-160t ileli kathathu ePangang.
Sebenzisa isilayidi esidityanisiweyo sesango lesilayidi esine-HP & HD Zro2 yokufaka sisalathiso kunye nolwazelelo lophuhliso lokunyibilikisa isinyithi kunye nesiguquli kwixesha elizayo.
Egqithileyo Isinyithi Powder / Ti Series Powder Sintering gasket
Okulandelayo: I-Zirconia Umbala wombane (PMO1 Umgangatho）